Madaxweynaha Somaliland Iyo Ku Xigeenkiisa Oo Ka Qaybgalay Aaska Xoghayihii Kulmiye Marxuum Keyse Xasan Oo Si Heer Qaran Loogu Aasay Hargeysa – Araweelo News Network (Archive)
Madaxweynaha Somaliland Iyo Ku Xigeenkiisa Oo Ka Qaybgalay Aaska Xoghayihii Kulmiye Marxuum Keyse Xasan Oo Si Heer Qaran Loogu Aasay Hargeysa
Hargeysa(ANN)Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) iyo ku xigeenkiisa C/raxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici) ayaa maanta ka qeyb galay aas qaran oo loo sameeyay Xoghayihii guud ee xisbiga tallada haya ee KULMIYE Marxuum Keyse Xasan Cigge,oo lagu aasay xabaalaha
Naaso-hablood ee Bariga magaalada Hargeysa. ka dib markii uu Axaddii todobaadkan ku geeriyooday dalka Djibouti oo xaalad caafimaad loogu qaaday ka dib markii uu wadnaha xanuun kaga soo booday.
Meydka Marxuumka oo laga soo duuliyay maanta dalka Djibouti iyadoo la huwiyay calanka jamhuuriyada Somaliland waxaa madaarka Hargeysa ku qaabishay Guddidii qaranka ee Madaxweyne Siilaanyo u saaray qaban qaabada aaska Marxuumka iyo boqolaal qof , waxaana ka dibna waxaa iyadoo waxa Boqolaal baabuur ay kasoo galbiyeen madaarka, waxaanay geeyeen xabaalaha Naaso-hablood ee Bariga magaalada Hargeysa.
Madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ka hadlay aaskaasi ayaa sheegay inuu ka naxay geerida Xoghayihii xisbiga KULMIYE Marxuum- Keyse Xasan Cigge, wuxuuna ku tilmaamay inuu ahaa nin weyn oo dalkiisa u soo shaqaynayay.
“Alle ha u naxariistee Marxuum Keyse Xasan Cige waxa uu ahaa nin aad u wanaagsan oo qarankan ka dhintay.waxaanu ahaa Nin ku fiican cibaadada oo af-gaaba n,”ayuu yidhi Madaxweynuhu
Madaxweyne Axmed Siilaanyo waxa uu mar kale dhambaal tacsi ah u diray qoyskii, qaraabadii iyo shacbiga Somaliland oo uu ka tacsiyadeeday geerida marxuumka waxaanu ILAAHAY uga baryay inuu naxariistii jano ka waraabiyo qoyskiisiina samir iyo iimaan ka siiyo.
Waxa kale oo ka hadlay Aaskaasi Wasiiro, Xildhibaano iyo Hoggaanka xisbiga KULMIYE waxaanay dhammaantood ka warameen kaalintii uu Marxuumku kaga jiray siyaasada, waxaanay dhamaantood ku sifeeyeen inuu ahaa nin dhawrsoon oo daacad ah.
Marxuum Keyse Xasan Cigge waxa Xoghayaha guud ee KULMIYE loo magacaabay shirweynihii labaad ee xisbigaasi ku yeeshay Hargeysa bishii March ee sanadkii 2008-kii, isagoo marxuumku waqtiigaa kasoo laabtay dhinaca qurbaha oo mudo dheer uu ku noolaa.